မြန်မာကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးဖို့ လှုပ်ရှားသူများတောင်းဆို
ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ World Children’s Day
( ZAWGYI/UNICODE) ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ကလေးဘဝ လုံခြုံမှု မျှော်လင့်ချက်အနာဂတ် ပညာရေး ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မှုတွေပေးဖို့ ကမ္ဘာတဝှမ်း လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေကြချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေအတွက် ကလေးအခွင့်အရေး လုံခြုံရေး အထူးကာကွယ်ပေးဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်လို့ ကလေးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်း ကျမဆုမွန် စုစည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ ( World Children's Day) အဖြစ် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ၁၉၅၄ခုနှစ်က စလို့ ကျင်းပလာခဲ့ကြတာ ဒီနှစ်၂၀၂၀ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့ကတော့ (၆၆)နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ် ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ကျင်းပတဲ့နေ့နဲ့ တပြိုင်နက်တည်း (United Nations Convention on the Rights of the Child.) ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရှင်း အထိမ်းအမှတ်နေ့ကိုလည်း ကမ္ဘာမှာရော မြန်မာမှာပါ ကျင်းပပြီး ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ကလေးတွေကို အထူးလုံခြုံ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ ၃၁ နှစ်​မြောက် က​လေးသူငယ်အခွင့်အ​ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်း အထိမ်းအမှတ် online အခမ်းအနား အစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ပြီး ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသားအဆင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ဒဏ်သင့်ကလေးငယ်သေဆုံးမှု စံချိန်တင် မြင့်တက်လာတဲ့ စိုးရိမ်စရာ အနေအထား ဖြစ်လာနေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။
" ကလေးများရဲ့ လုံခြုံရေးလို့ပြောလိုက်တိုင်း ပြောလိုက်တိုင်း ကျနော့်မျက်စိထဲမှာ စစ်ပွဲအတွင်းမှာ ဘယ်ကလာမှန်း မသိသော ဗုံးကျည်တွေ၊ အမြောက်ဆံတွေကြားထဲမှာ ပြေးလွှားပုန်းအောင်းနေရတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ ဒီဗုံးဆံတွေကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်က ကလေးတွေကို မျက်စိထဲမြင်မိပါတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ အခုအချိန်အထိ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာတော့ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ ကလေးတွေ စံချိန်တင်သေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ UNICEFရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ သေဆုံးမှုက ဒီနှစ်မှာ တော်တော့်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်သူကို အရေးယူမှုတွေ ကျန်ရှိနေတဲ့မိသားစုနဲ့ကလေးအတွက် ညှာတာမှုနဲ့ ထိုက်သင့်သော ထောက်ပံ့မှုတွေ မရရှိသေးတာ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဆိုးဝါးမှုထဲကတခုဖြစ်ပါတယ်။"
အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်ကာလ က​လေးတွေ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ လူမှုဘဝကျပ်တည်းမှုတွေကနေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့ ကလေးလုပ်သားလေးတွေရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကိုလည်း အရေးတကြီးဖြေရှင်းပေးဖို့လိုလာနေပြီလို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
" စိုးရိမ်စရာတခုက ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ကျောင်းတွေ အကုန်ပိတ်ထားရပါတယ်။ ဒီပညာရေးကိစ္စက ဘယ်လောက်အထိ ကမောက်ကမဖြစ်သွားမလဲ။ အွန်လိုင်းကနေ သင်ပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ ကလေးတိုင်းက အွန်လိုင်းမတက်နိုင်တဲ့အရာမျိုးပါ။ နယ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက် ပညာရေးက အရမ်းကိုထိခိုက်နေတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ပညာရေးတွေဆုံးရှုံးပြီး ကလေးအလုပ်သမားတွေအဖြစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုတွေ ပိုမိုတိုးပွားလာမှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လက်ရှိမှာ ဒါတွေကို တားဆီးနိုင်မှုမရှိဘူး။ အဓိကကတော့ ကလေးတွေ အလုပ်သမားဖြစ်ရတဲ့အထဲမှာ တခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မိသားစုတွေရဲ့စီးပွားကျပ်တည်းမှုကနေ ကလေးတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို မရောက်သင့်ပဲရောက်တယ်။ အခုစက်ရုံတွေ ခိုးဖွင့်ပြီးတော့ ခုနတုန်းကကိစ္စလို ကလေးတွေကို Bonded labor လို ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်တဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးတော့ စေခိုင်းခံနေရတဲ့ကလေးအလုပ်သမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရဘက်က ဥပဒေတွေပြဌာန်းတာမကပဲ လိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ကျူးလွန်သူတွေကို ထိရောက်စွာ အရေးယူသော ယန္တယားတွေ မြန်မြန်ပြဌာန်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။"
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း တိုင်းရင်းဒေသတွေက စစ်ဘေးသင့်ကလေးတွေအပါအဝင်လူမမည် ကလေးလေးတွေတိုင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အထူးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်း စစ်ပြေးစစ်ရှောင် ကလေးသူငယ်တွေနဲ့မိခင်တွေကို စောင့်ရှောက်မှု ကူညီပေးနေသူလည်းဖြစ် ကချင်ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၁) ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောပါတယ်။
" အဓိက ကလေးတွေအတွက်က နံပတ်(၁)က ကျန်းမာရေးပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ကတော့ ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်က ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့။ စစ်ရှောင်ဒေသတွေမှာဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးက အထူးကို ဂရုစိုက်ကြည့်ရှု့ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ နောက် နံပတ်(၂)က ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးပေါ့။ ပညာရေးထက်ကို ကလေးတွေထက် ထပ်ပြီး အရေးကြီးလာတာက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှု ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံမှု ဒါတွေကလည်း ကလေးလေးတွေအတွက် အင်မတန်မှကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုလုံခြုံမှုတွေမရှိရင် ကလေးလေးတွေရဲ့အနာဂတ်က သူတို့ဘဝအသက်တာက ဘယ်လိုမှ ဆက်သွားဖို့မလွယ်ပါဘူး။"
ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ကနေ မြန်မာပြည်တိုင်းရင်းဒေသက စစ်ရှောင်ပြေးနေရတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းက စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေက လုံခြုံမှုမဲ့နေတဲ့ လူမမည်ကလေးတွေအတွက် ဒေါ်ဒွဲဘူက အထူးဆုတောင်းပေးပါတယ်။
" ကျမက ဆုတောင်းပေးချင်တာက ကလေးလေးတိုင်းအတွက် သူတို့ရဲ့ ကလေးဘဝလေးတွေ တသက်လုံးအတွက် အမှတ်ရစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ ကလေးတိုင်းကလည်း အမှတ်ရနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ကလေးဘဝမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ စိတ်ထိခိုက်ခံစားမှုတွေ နာကျင်မှုတွေ ပပျောက်ပြီးမှ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့ လူ့အသိုက်အဝန်းထဲကို သူတို့တွေရောက်ရှိပြီး စိတ်သောကဆင်းရဲမှုတွေ ကင်းဝေးပြီးတော့ လုံခြုံတဲ့ဘဝတွေ ကိုရောက်ရှိပါစေလို့ ကျမအနေနဲ့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်။"
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့မှာ ကမ္ဘာပေါ်က ကလေးတိုင်း ကလေးတိုင်းဟာ လုံခြုံမှုရှိရမယ် ကျန်းမာသန်စွမ်းရမယ် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကလေးဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကို မျှော်လင့်ပိုင်ခွင့် ကလေးအခွင့်အရေးတွေ ရရှိနိုင်ပါစေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ကလေးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက သက်ဆိုင်သူတို့ဘက်က ကလေးအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပိုတိုးလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ထိခိုက်လွယ်ကလေးသူငယ်တွေ လုံခြုံဘေးကင်းပြီး မြေတောင်မြှောက်ပေးသော မိသားစု၊ လူမှုအသိုက်အဝန်း၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုနည်းတူ ပျိုးထောင်ပေးသော နေရာတွေမှာလူလားမြောက်ခွင့် ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ရေး EU ဥရောပသမဂ္ဂက “My Childhood, My Right” စီမံကိန်း မြန်မာနိုင်ငံမှာထောက်ပံ့ ကူညီပေးသွားမယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
(UNICODE) ဒီကနေ့ နိုဝငျဘာ ၂၀ရကျနဟေ့ာ ကမ်ဘာ့ကလေးမြားနဖွေ့ဈပါတယျ။ ကလေးသူငယျတှရေဲ့ ကလေးဘဝ လုံခွုံမှု မြှျောလငျ့ခကျြအနာဂတျ ပညာရေး ကနျြးမာရေးပိုငျးဆိုငျရာ ပွုစုစောငျ့ရှောကျကာကှယျမှုတှပေေးဖို့ ကမ်ဘာတဝှမျး လှုပျရှားတောငျးဆိုနကွေခြိနျမှာပဲ မွနျမာနိုငျငံက ကလေးတှအေတှကျ ကလေးအခှငျ့အရေး လုံခွုံရေး အထူးကာကှယျပေးဖို့ အရေးတကွီးလိုအပျနပေါတယျလို့ ကလေးအခှငျ့အရေးလှုပျရှားသူတှေ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့အကွောငျး ကမြဆုမှနျ စုစညျးတငျပွပေးခငျြပါတယျ။
နှဈစဉျနှဈတိုငျး နိုဝငျဘာလ ၂၀ရကျနေ့ ရောကျတိုငျး ကမ်ဘာ့ကလေးမြားနေ့ ( World Children's Day) အဖွဈ ကမ်ဘာတဝှမျးမှာ ၁၉၅၄ခုနှဈက စလို့ ကငျြးပလာခဲ့ကွတာ ဒီနှဈ၂၀၂၀ပွညျ့နှဈ နိုဝငျဘာလ ၂၀ရကျနကေ့တော့ (၆၆)နှဈမွောကျနဖွေ့ဈ ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ကလေးမြားနကေ့ငျြးပတဲ့နနေဲ့ တပွိုငျနကျတညျး (United Nations Convention on the Rights of the Child.) ကလေးသူငယျ အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ ကှနျဗငျးရှငျး အထိမျးအမှတျနကေို့လညျး ကမ်ဘာမှာရော မွနျမာမှာပါ ကငျြးပပွီး ကလေးသူငယျအခှငျ့အရေးဆိုငျရာ စိနျချေါမှုတှနေဲ့ ကလေးတှကေို အထူးလုံခွုံ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှုပေးဖို့ လှုပျရှားတောငျးဆိုနကွေပါတယျ။
ဒီကနေ့ ၃၁ နှဈမွောကျ ကလေးသူငယျအခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ကုလသမဂကှနျဗငျးရှငျး အထိမျးအမှတျ online အခမျးအနား အစီအစဉျကို တကျရောကျပွီး ကလေးသူငယျအခှငျ့အရေးဆိုငျရာ အထူးဆှေးနှေးခဲ့တဲ့ အမြိုးသားအဆငျ့ ကလေးသူငယျ အခှငျ့အရေးကျောမတီရဲ့အဖှဲ့ဝငျလညျးဖွဈ လူ့အခှငျ့အရေးလှုပျရှားသူ ညီမြှခွငျးမွနျမာအဖှဲ့ရဲ့ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဦးအောငျမြိုးမငျးက မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈဒဏျသငျ့ကလေးငယျသဆေုံးမှု စံခြိနျတငျ မွငျ့တကျလာတဲ့ စိုးရိမျစရာ အနအေထား ဖွဈလာနတေယျလို့ပွောပွပါတယျ။
" ကလေးမြားရဲ့ လုံခွုံရေးလို့ပွောလိုကျတိုငျး ပွောလိုကျတိုငျး ကနြေျာ့မကျြစိထဲမှာ စဈပှဲအတှငျးမှာ ဘယျကလာမှနျး မသိသော ဗုံးကညျြတှေ၊ အမွောကျဆံတှကွေားထဲမှာ ပွေးလှားပုနျးအောငျးနရေတဲ့ ကလေးငယျလေးတှေ ဒီဗုံးဆံတှကွေောငျ့ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကခငျြပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျက ကလေးတှကေို မကျြစိထဲမွငျမိပါတယျ။ ကနြျောတို့ တိုငျးပွညျမှာ အခုအခြိနျအထိ ပွညျတှငျးပဋိပက်ခတှေ ရှိနတေဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့ ဒီနှဈအတှငျးမှာတော့ အထူးသဖွငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတှငျးမှာ ကလေးတှေ စံခြိနျတငျသဆေုံးမှုတှမွေငျ့တကျလာနပေါတယျ။ UNICEFရဲ့ထုတျပွနျခကျြထဲမှာ သဆေုံးမှုက ဒီနှဈမှာ တျောတေျာ့ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖွဈပါတယျ။ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးတှအေတှကျ ထိရောကျတဲ့ ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာ ကြူးလှနျသူကို အရေးယူမှုတှေ ကနျြရှိနတေဲ့မိသားစုနဲ့ကလေးအတှကျ ညှာတာမှုနဲ့ ထိုကျသငျ့သော ထောကျပံ့မှုတှေ မရရှိသေးတာ ကနြျောတို့တိုငျးပွညျရဲ့ဆိုးဝါးမှုထဲကတခုဖွဈပါတယျ။"
အထူးသဖွငျ့ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ကိုဗဈကာလ ကလေးတှေ ထိခိုကျဆုံးရှုံးရတဲ့ ပညာရေး ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုနဲ့ လူမှုဘဝကပျြတညျးမှုတှကေနေ ရငျဆိုငျကွုံတှလေ့ာရတဲ့ ကလေးလုပျသားလေးတှရေဲ့ လုပျငနျးခှငျတှငျး ညှငျးပမျးနှိပျစကျခံနရေတဲ့ ဒုက်ခတှကေိုလညျး အရေးတကွီးဖွရှေငျးပေးဖို့လိုလာနပွေီလို့ ဦးအောငျမြိုးမငျးက ဆကျပွောပါတယျ။
" စိုးရိမျစရာတခုက ဒီကိုဗဈကာလအတှငျးမှာ ကြောငျးတှေ အကုနျပိတျထားရပါတယျ။ ဒီပညာရေးကိစ်စက ဘယျလောကျအထိ ကမောကျကမဖွဈသှားမလဲ။ အှနျလိုငျးကနေ သငျပေးနတေယျဆိုပမေဲ့ ကလေးတိုငျးက အှနျလိုငျးမတကျနိုငျတဲ့အရာမြိုးပါ။ နယျဒသေတှမှောရှိတဲ့ကလေးတှအေတှကျ ပညာရေးက အရမျးကိုထိခိုကျနတေယျ။ ကိုဗဈကာလအတှငျးမှာ ပညာရေးတှဆေုံးရှုံးပွီး ကလေးအလုပျသမားတှအေဖွဈ ကူးသနျးရောငျးဝယျမှုတှေ ပိုမိုတိုးပှားလာမှာ စိုးရိမျပါတယျ။ ကနြျောတို့လကျရှိမှာ ဒါတှကေို တားဆီးနိုငျမှုမရှိဘူး။ အဓိကကတော့ ကလေးတှေ အလုပျသမားဖွဈရတဲ့အထဲမှာ တခုအပါအဝငျဖွဈတဲ့ မိသားစုတှရေဲ့စီးပှားကပျြတညျးမှုကနေ ကလေးတှဟော လုပျငနျးခှငျထဲကို မရောကျသငျ့ပဲရောကျတယျ။ အခုစကျရုံတှေ ခိုးဖှငျ့ပွီးတော့ ခုနတုနျးကကိစ်စလို ကလေးတှကေို Bonded labor လို ညှငျးပမျးနှိပျစကျတဲ့ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျပွီးတော့ စခေိုငျးခံနရေတဲ့ကလေးအလုပျသမားတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစိုးရဘကျက ဥပဒတှေပွေဌာနျးတာမကပဲ လိုကျလံစုံစမျးစဈဆေးပွီး ကြူးလှနျသူတှကေို ထိရောကျစှာ အရေးယူသော ယန်တယားတှေ မွနျမွနျပွဌာနျးပွီးတော့ လုပျဆောငျပေးဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။"
မွနျမာနိုငျငံတဝနျး တိုငျးရငျးဒသေတှကေ စဈဘေးသငျ့ကလေးတှအေပါအဝငျလူမမညျ ကလေးလေးတှတေိုငျးရဲ့ ကနျြးမာရေးပိုငျးဆိုငျရာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လုံခွုံမှုတှနေဲ့ပတျသကျလို့ အထူးစောငျ့ရှောကျမှုပေးဖို့ လိုအပျနတေဲ့အနအေထားဖွဈတယျလို့လညျး စဈပွေးစဈရှောငျ ကလေးသူငယျတှနေဲ့မိခငျတှကေို စောငျ့ရှောကျမှု ကူညီပေးနသေူလညျးဖွဈ ကခငျြပွညျသူ့ပါတီရဲ့ဒုဥက်ကဋ်ဌ(၁) ဒျေါဒှဲဘူက ပွောပါတယျ။
" အဓိက ကလေးတှအေတှကျက နံပတျ(၁)က ကနျြးမာရေးပါ။ ကနျြးမာရေးမကောငျးလို့ကတော့ ကလေးတှရေဲ့အနာဂတျက ဆကျလကျရှငျသနျဖို့ အခကျအခဲရှိတယျပေါ့။ စဈရှောငျဒသေတှမှောဆိုရငျ ကလေးတှရေဲ့ကနျြးမာရေးက အထူးကို ဂရုစိုကျကွညျ့ရှု့ပေးဖို့ လိုအပျတယျပေါ့နျော။ နောကျ နံပတျ(၂)က ကလေးတှရေဲ့ ပညာရေးပေါ့။ ပညာရေးထကျကို ကလေးတှထေကျ ထပျပွီး အရေးကွီးလာတာက စိတျပိုငျးဆိုငျရာလုံခွုံမှုပါ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာလုံခွုံမှု ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လုံခွုံမှု ဒါတှကေလညျး ကလေးလေးတှအေတှကျ အငျမတနျမှကို အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီလိုလုံခွုံမှုတှမေရှိရငျ ကလေးလေးတှရေဲ့အနာဂတျက သူတို့ဘဝအသကျတာက ဘယျလိုမှ ဆကျသှားဖို့မလှယျပါဘူး။"
ဒါကွောငျ့ ဒီကနေ့ ကရြောကျတဲ့ ကမ်ဘာ့ကလေးမြားနကေ့နေ မွနျမာပွညျတိုငျးရငျးဒသေက စဈရှောငျပွေးနရေတဲ့ ကလေးတှနေဲ့ ကမ်ဘာတဝှမျးက စဈဖွဈနတေဲ့နိုငျငံတှကေ လုံခွုံမှုမဲ့နတေဲ့ လူမမညျကလေးတှအေတှကျ ဒျေါဒှဲဘူက အထူးဆုတောငျးပေးပါတယျ။
" ကမြက ဆုတောငျးပေးခငျြတာက ကလေးလေးတိုငျးအတှကျ သူတို့ရဲ့ ကလေးဘဝလေးတှေ တသကျလုံးအတှကျ အမှတျရစခေငျြပါတယျပေါ့နျော။ ကလေးတိုငျးကလညျး အမှတျရနတေတျပါတယျ။ အဲ့တော့ ကလေးဘဝမှာ ကွုံခဲ့ရတဲ့ စိတျထိခိုကျခံစားမှုတှေ နာကငျြမှုတှေ ပပြောကျပွီးမှ လုံခွုံစိတျခရြတဲ့ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှုပေးနိုငျတဲ့ လူ့အသိုကျအဝနျးထဲကို သူတို့တှရေောကျရှိပွီး စိတျသောကဆငျးရဲမှုတှေ ကငျးဝေးပွီးတော့ လုံခွုံတဲ့ဘဝတှေ ကိုရောကျရှိပါစလေို့ ကမြအနနေဲ့ ဆုတောငျးပေးပါတယျရှငျ့။"
ဒီကနေ့ ကရြောကျတဲ့ ကမ်ဘာ့ကလေးမြားနမှေ့ာ ကမ်ဘာပျေါက ကလေးတိုငျး ကလေးတိုငျးဟာ လုံခွုံမှုရှိရမယျ ကနျြးမာသနျစှမျးရမယျ ငွိမျးခမျြးတဲ့ ကလေးဘဝကို ပိုငျဆိုငျရမယျ့ အနာဂတျမြှျောမှနျးခကျြတှကေို မြှျောလငျ့ပိုငျခှငျ့ ကလေးအခှငျ့အရေးတှေ ရရှိနိုငျပါစကွေောငျး ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးက ကလေးအခှငျ့အရေး လှုပျရှားသူတှေ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ တကျကွှလှုပျရှားသူတှကေ သကျဆိုငျသူတို့ဘကျက ကလေးအခှငျ့အရေး ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှုတှပေိုတိုးလုပျဆောငျပေးဖို့ တောငျးဆိုလှုပျရှားနကွေတာဖွဈပါတယျ။
အလားတူ မွနျမာနိုငျငံတှငျးက ထိခိုကျလှယျကလေးသူငယျတှေ လုံခွုံဘေးကငျးပွီး မွတေောငျမွှောကျပေးသော မိသားစု၊ လူမှုအသိုကျအဝနျး၊ ဒါမှမဟုတျ မိသားစုနညျးတူ ပြိုးထောငျပေးသော နရောတှမှောလူလားမွောကျခှငျ့ ဆောငျကွဉျးပေးနိုငျရေး EU ဥရောပသမဂ်ဂက “My Childhood, My Right” စီမံကိနျး မွနျမာနိုငျငံမှာထောကျပံ့ ကူညီပေးသှားမယျလို့ ကမ်ဘာ့ကလေးမြားနမှေ့ာ ထုတျပွနျထားပါတယျ။